यौन र जीवन – Page4– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
लन्डन, २६ कात्तिक । ऐतिहासिक चिनियाँ बादशाहको एउटा प्राचीन बन्दुक लिलाम गर्दा पच्चीस लाख अमेरिकी डलर उठेको छ । विश्वभरिका पूरातात्विक महत्वका वा अनौठा उत्पादन, सरसामान लिलाम गर्ने प्रख्यात बेलायती कम्पनी ‘सुथबाइज लन्डन’ले उक्त बन्दुक लिलामीमा चढाउँदा अन्तिम बोल, कबोलमा निजी क्षेत्रका एकजना एसियाली पारखीले १९ लाख ८५ हजार बेलायती..
बिवाह अघि गर्भ रहिहाले कसरी त्यसको समाधान गर्ने?
म २२ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ। केही दिनअघि एक जना केटासाथीसँग मेरो यौनसम्पर्क भयो। जब ऊसँग सम्पर्क भयो त्यो दिनदेखि मेरो तल्लो पेट एकदम दुखिरहेको छ। यस्तो किन भएको होला ? हामीले कुनै साधन पनि प्रयोग गरेका थिएनौं। उक्त दिन मेरो महिनावारी भएको ११ दिन भएको थियो। यसबाट कतै गर्भ रहने त होइन ? कस्तो बेलाको सम्पर्कले गर्भ रहन्छ ? गर्भ रहिहाले..
महिलाहरूप्रति पुरूषहरू सहजै आकर्षित हुन्छन् । त्यसमा पनि महिलाको वक्षस्थलबाट पुरूषहरु झनै आकर्षित हुन्छन् । विभिन्न संस्थाहरुले गरेको अध्ययनमा प्राय पुरूषहरूको आँखा महिलाको स्तनमा पर्ने गर्छ । वक्षस्थल महिलाको सौन्दर्यको एक अभिन्न अंग नै हो यसमा दुई मत नहोला । वक्षस्थलको स्वरुपले महिलाको समग्र सुन्दरतामा प्रभाव पार्छ । महिलाकाे..
एजेन्सी । प्रायः युवतीहरुमा यौन चाहना भएपनि पुरुषहरु जसरी उनीहरु यौनसम्पर्कका लागि चाडै तयार हुदैनन् । तर नेट चैटिंग पछि भेट्ने हरु भरसक त्यसै दिनमा सेक्स गर्छन । यो अनुपात दैनिक भेट्ने हरुमा धेरै समय लाग्ने गर्छ र सेक्स को लागि त बर्षौ कुर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सालै एउटा फिटनेस पत्रिका द्वारा गरिएको सर्वे मा विभिन्न सोशल नेटवर्किंग..
केराबारे यी २० रोचक तथ्यहरु जानीराख्नुहोस् केरा खानुका फाईदा
केरा हामीले चिनेको र जानेको फलफूल हो । हामी प्रायः केरा खाइरहेका हुन्छौं । तर केराबारे यी २० रोचक यथार्थ जानेपछि यो तपाईलाई झन् स्वादिलो लाग्न सक्छ । आउनुहोस् केराबारे २० तथ्यहरु जानी राखौं : केरामा ट्राइप्टोफान पाइन्छ जुन मानिसले खाएपछि सेरोटोनिनमा रुपान्तरिक हुन्छ । यसले शरीरमा सेरोटोनिनको मात्रा बढाउँछ जसले प्रभावकारी र..
राजस्थान,-भारतको राजस्थानस्थित मालपुराको एउटा गाउँमा गाउँलेहरु सुनको सिक्का खोज्न भन्दै दिनरात ढिस्को खोस्रन थालेका छन् । तीन दिनदेखि जानकीपुरामा सुनको सिक्का खोज्न सर्वसाधारणहरु ढिस्को खोस्रने र खाल्डो खन्न व्यस्त छन् । ठाउँठाउँमा खाल्डो खन्ने क्रम बढेसँगै खाडलमा पुरिएर मानवीय क्षति हुन सक्ने सम्भावना बढेको स्थानीय प्रशासनको..
एजेन्सी / डेली मेल न्यू मेक्सिको । न्यू मेक्सिकोमा एउटा निकै अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । ३६ वर्षीया आमा आफ्नै १९ वर्षे छोरासँग प्रेम सम्बन्धमा भएको खबर खुल्न आएको छ । सँगै बस्नका लागि आफूहरु कुनै पनि जोखिम मोल्न तयार भएको यो जोडीको भनाई छ ।मोनिका मेर्स, ३६, उनका छोरा क्यालेब पिटरसन, १९, लाई मन पराएका कारण उनलाई १९ महिनेको जेल सजायँ..
जिते इन्जिनियरले,डाक्टर बेहोस
एक इन्जिनियरले जागिर पाएनछन् । अनि उनले क्लिनिक खोले । ‘रु. ३०० मा उपचार गराउनुस, निको नभएर रु. १००० फिर्ता,’ भनेर बोर्डमै लेखेछन् । उनको यस्तो चर्तिकला देखेर क्लिनिक नजिकै बस्ने डाक्टरलाई रिस उठेछ र उनले १००० असुल्ने उपाय सोचेछन् । ती डाक्टर क्लिनिक गए । डाक्टरःमेरो जिब्रोले केही चिजको स्वाद थाह पाउँदैन । के भएको होला यस्तो ? इन्जिनियरः..